Weelasha Slag, Casting caaryada iyo malqacad, Ingot, Vertical Mill, Casting Wasakh - Birta Gaarka ah
About BIRTA GAAR Shiinaha (CSM)
Shiinaha Birta Gaarka Group Limited (CSM), qeybiyaha ah ee wax bir & mashiinada wax soo saarka, dibiiciga inay bixiyaan tayada sare ee castings, waxyaabaha machining-sax sare, iyo welded been macaamiisha qiimeeyo ka adduunka oo dhan. Dhinaca kale, waxaan ku siin injineernimada design iyo mashruuca macasha sidoo ...
Waxaana lagu siinayaa qodniinka- Makiinado, Cement & Macdanta mishiino, Copper-bireed Warshadaha Facilities xal adduunka oo dhan.
ISO9001: 2008 saaraha shahaado of tayo sare, soo saarka Kharashka-ku ool ah. Had iyo jeer wuxuu qadaray tayada ee meesha ugu horeysa oo si adag u kormeeraan tayada alaabooyinka ee geedi socodka kasta.
saaraha Professional dheriyada slag, iyo malqacad ridaya, caaryada ingot, Vertical Mill,-sax sare waxyaabaha machining, iyo welded been.
Bedelka iyo malqacad in malqacad dikhaw Workshop Matte
Titanium durbaanka electrodeposition
Bedelka iyo malqacad in Workshop dikhaw iyo malqacad ridaya
Aluminum Electrolyzer Sow caaryada, Sow Pan
Chucks leh ama aan lahayn Hydro-dhululubo
Vertical Mill iyo dayactir GR dhagax taagan ...
Girth marsho for dubo Rotary, dhagax kubada iyo tube ...
Shoe Track Sprockets drive wheel drive
Chain mashiinka shabaggeeda Link Chain
Chain mashiinka shabaggeeda kooxda shabaggeedii saxan
Chain mashiinka shabaggeeda Plate iyo shabaggeedii
Vertical Mill iyo dayactir dhagax toosan Gr ...
mashaariicda la soo dhaafay
Waxaan leenahay waayo-aragnimo hodan ku ah wax soo saarka ee dheryihii slag, iyo malqacad ridaya, caaryada ingot, Vertical Mill,-sax sare waxyaabaha machining, iyo welded been, iyo waxay leeyihiin ganacsi muddada-dheer ee Europe, United States, Australia iyo dalal kale.